Tour – Nepali Community
एक सामाजिक र नागरिक केन्द्र
स्थानीय बजारको बारेमा सोच्दा तपाई के सोच्नुहुन्छ? वस्तुहरू सेल्फहरूमा स्ट्याक गरिएको छ, भुइँदेखि छत? कुराकानीमा
ग्राहकहरूको बकबक? काउन्टर पछाडि बजार मालिकको परिचित अनुहार?
के साना बजारहरूमा ठाउँको कमी छ उनीहरूले व्यक्तिगत सम्बन्ध र सेवाका अवसरहरूमा क्षतिपूर्ति गर्छन्। आफ्ना
ग्राहकहरूको दैनिक जीवनमा बारम्बार रोकको रूपमा, तिनीहरू प्रायः समुदायको सामाजिक र नागरिक जीवनको केन्द्र हुन्।
आज हामीले काम र घरको बीचमा धेरै ठाउँहरूमा समुदाय भेट्टाउन सक्छौं – कफी पसल, पुस्तकालयहरू, पुस्तक पसलहरू, सामुदायिक केन्द्रहरू, धार्मिक बैठक ठाउँहरू, सामुदायिक बगैंचाहरू, र स्थानीय बजारहरू। सामुदायिक बस्ने कोठाहरू जस्तै, यी ठाउँहरूले हामीलाई आराम र जडान गर्न ठाउँ प्रदान गर्दछ।
पसलमा हिँड्ने सबैजना उहाँसँग भेट्थे र उसले राम्रो छिमेकको केन्द्र बिन्दु बनायो। सबै सेल्सम्यानहरू आएर भेट्थे ।
तिनीहरूले सबै प्रकारका सामुदायिक चीजहरू र गतिविधिहरूको बारेमा कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो — बच्चाको रूपमा यो सुन्न राम्रो थियो, र तिनीहरू राम्रो रोल मोडेल थिए। —माइकल एलेन, ग्राहक, जर्ज्स मार्केट, बर्लिंगटन
सामान्यतया, तपाईंले आफ्नो देशका केही मानिसहरूलाई भेट्नुहुन्छ। अब सबैसँग भेट्ने समय छैन, मलाई लाग्छ, उनीहरू घर वा पार्टीहरू भेट्छन्। तपाईं यहाँ आउनुहोस्, तपाईं आफ्नो भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ, जुन राम्रो छ, त्यसैले यो घरको टुक्रा
हो। —भ्लादिमिर सेलेक, ग्राहक, यूरो मार्केट, साउथ बर्लिंगटन
साझा अनुभवको चौतारी
चाहे सन् १९२२ मा वाष्प जहाजबाट यात्रा गर्नु होस् वा २०२२ मा हवाईजहाजबाट, बसाइँसराइको यात्राले हानि र अवसर
दुवैलाई समेट्छ। आप्रवासी र शरणार्थीहरूले परिवार र साथीहरू, पेशाहरू, पैसा र सामानहरू, परम्परागत सामाजिक संस्थाहरू, र पैतृक भूमिमा जरा गाडेको पहिचान छोड्छन्। तिनीहरू आफ्नो र आफ्नो परिवारको लागि राम्रो जीवन निर्माण गर्ने इच्छा लिएर आउँछन्। बजारहरूले अनुभव बुझ्ने ग्राहकहरू र मालिकहरूसँग जडानको लागि सुरक्षित स्थान प्रस्ताव गर्न सक्छ। यहाँ, नयाँ आउनेहरूले व्यावहारिक सल्लाह खोज्न र खानाको विश्वव्यापी भाषा मार्फत बन्धनहरू बनाउन सक्छन्।
तिनीहरू यहाँ आउने मानिसहरू, फरक देश, फरक संसार। तिनीहरू डराए र तिनीहरू डराए। र यदि तपाइँ तिनीहरूलाई न्यानो भावना दिनुहुन्छ। स्वागत छ। त्यसपछि उनीहरूले यो ठाउँ उनीहरूका लागि राम्रो ठाउँ भएको महसुस गर्छन् र उनीहरू बलियो महसुस गर्छन्, र उनीहरू आफ्नो भविष्यको लागि नयाँ फराकिलो लागि जारी राख्छन्। जस्तो कि जब म पहिलो पटक भर्मन्टमा आएँ, अमेरिकी मानिसहरू, तिनीहरूले मेरो लागि यो भावना दिए कि मैले तिनीहरूलाई नबुझे पनि, र तिनीहरूले मलाई बुझ्दैनन् किनभने भाषा। अनि त्यही भएर बुझ्छु। —एन्थोनी ट्रान, मालिक जोन र हुओङ ट्रानको छोरा, थाई फाट मार्केट, बर्लिंगटन
म मेरा ग्राहकहरूलाई घरमा भएको महसुस गर्न चाहन्छु। र म भन्न सक्छु कि यदि तिनीहरू फ्रेन्च वा स्वाहिली वा लिंगाला बोल्दैछन्, तब म उनीहरूलाई त्यहाँ भेट्नेछु, किनकि म ती सबै भाषाहरू बोल्छु, र उनीहरूलाई उनीहरू आफ्नो मातृभूमिमा किनमेल गरिरहेको महसुस गराउँछु जहाँ उनीहरू किनमेल गर्न सक्छन्।—मुइसा मुट्युम, मालिक, एम. स्क्वायर भर्मन्ट, विनोस्की
चिच्क्स बाजारको सधैं मुस्कान र एउटा कथा थियो। —लिसा एम. बुटिन, ग्राहक, चिक्स मार्केट, विनोस्की
हामी मानिसहरूलाई क्रिसमस टोकरी र टर्की ल्याउँछौं। मेरो बुबा धेरै उदार हुनुहुन्थ्यो। उसले समुदायलाई धेरै खानेकुराहरू दिन्थ्यो, मानिसहरूलाई जसको बारेमा उसलाई थाहा थियो। किनभने तपाईंसँग त्यो समय थियो जहाँ चीजहरू थोरै कठिन थिए जब तपाईंसँग ऊनी मिलहरू चलिरहेका थिए। र सबैजना ऊनी मिलहरूमा काम गरिरहेका थिए। त्यसपछि ऊनी मिलहरू बन्द भए । —ल्यारी रोय, मालिक एमिल रोयका छोरा, रोय्स मार्केट, विनोस्की
एकअर्कालाई समर्थन गर्दै
स्थानीय बजारमा ग्राहक सेवा व्यापार लेनदेन भन्दा बढी छ। धेरै बजार मालिकहरू सामुदायिक नेताहरू हुन्। तिनीहरूले बच्चाहरूलाई सल्लाह दिन्छन्, वृद्धहरू र घरबाहिरहरूलाई मद्दत गर्छन्, कार नभएकाहरूलाई सवारी प्रदान गर्छन्, र खाना पुर् याउँछन्। ग्राहकहरूले प्राय: अपरिचित नोकरशाहीलाई नेभिगेट गर्न मद्दत खोज्छन्, चाहे कानुनी कागजातहरू पूरा गर्ने, पार्किङ टिकट तिर्ने, वा काम वा आवास खोज्ने।
अब्दी, उसले आफ्नो समुदायलाई मद्दत गर्न घण्टा र घण्टा खर्च गर्दछ। तपाईं त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ — यदि तपाईंसँग एउटा पत्र छ, यदि तपाईं अंग्रेजी बोल्नुहुन्न भने, उहाँले तपाईंको लागि अनुवाद गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको आवेदनहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। जब म उसलाई हेर्छु, मलाई लाग्छ, “वाह, यो मान्छे अर्कै हो, उसले आफ्नो समुदायको लागि अद्भुत काम गरिरहेको छ।” —अहमद ओमर, किसमायो किचेन मालिक, अब्दी नुर हसनमा, मालिक, सामुदायिक हलाल स्टोर, बर्लिंगटन
मेरो बुबा धेरै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो। कसैलाई आवश्यक पर्यो, उसले सक्दो सहयोग गर्नेछ। उहाँले हामीलाई सधैं कम भाग्यशालीहरूलाई दयालु हुन भन्नुभयो, किनभने तिनीहरू र हामी बीचको धेरै पातलो रेखा थियो। कुनै पनि समयमा, हामी त्यो स्थितिमा हुन सक्छौं र तपाईले के राख्नुभयो, तपाईले फिर्ता पाउनुहुनेछ। —जुडी म्याक्लौरिन, संस्थापक जोन र मिल्ड्रेड म्याकलौरिनकी छोरी, जे एण्ड एम किराना, बर्लिंगटन
यो किनमेल मात्र होइन। हामी चलचित्रहरू कुरा गर्छौं, हामी खेलकुदको कुरा गर्छौं, हामी भविष्यका योजनाहरू, पारिवारिक जीवनको बारेमा कुरा गर्छौं … धेरै मानिसहरू, धेरै संस्कृतिहरू भेट्नको लागि बजार एउटा उत्कृष्ट ठाउँ हो। —डाडो वुजानोभिक, मालिक, यूरो मार्केट, दक्षिण बर्लिंगटन
छिमेकी भेला हुने ठाउँ
बजार भनेको मानिसलाई जोड्ने धागो हो। तिनीहरू भावनात्मक र शारीरिक पोषणको स्रोत हुन्, बासिन्दाहरूको दैनिक जीवनमा बुनेका। ग्राहकहरू किनमेल गर्न आइपुग्छन् र समय बिताउन ढिलो गर्छन्।
बीसौं शताब्दीको पहिलो आधामा, आवासीय र व्यावसायिक जीवन शहरको केन्द्रहरूमा मिसिएको थियो। बजारहरू छिमेकहरूमा टाँसिएपछि, दैनिक अन्तरक्रिया सजिलो थियो। मानिसहरू एक रोटी, एक ग्यालन दूध, वा कसाई काउन्टरबाट मासुको टुक्राको लागि रोकिए। केटाकेटीहरू आफ्ना आमाबाबुको लागि कामहरू दौडे, हातको पहुँचमा पेनी क्यान्डीको लागि उत्सुक।
आज केही ग्राहकहरू उपलब्ध आवास भएको छिमेक वा उपनगरहरूमा बजारहरूबाट टाढा बस्छन्। तिनीहरू प्राय: कम किनमेल गर्न सक्छन् र बस वा कार द्वारा आइपुग्छन्। आप्रवासी र शरणार्थीहरूको लागि, तथापि, साना बजारहरूमा व्यक्तिगत जडान तिनीहरूको जीवनको एक महत्त्वपूर्ण भाग बनी रहेको छ।
हाम्रो पसल गतिविधिको केन्द्र थियो। हामीसँग हरेक दिन आउने केही केटाहरू थिए, र तिनीहरू कूलरमा गएर तिनीहरूको बियर समात्ने गर्थे। र कुनाको वरिपरि लुक्नुहोस् ताकि उनीहरूले मेरो बुबासँग कुरा गर्न सकून् र उनीहरूले बियरको बोतलमा चुस्नेछन्। [मेलम्यानहरू] भित्र आउनेछन् र तिनीहरूले सामानहरू किन्नुहुनेछ। सॉसेजको जार वा अचार अण्डाको जार खोल्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई त्यहाँ छोड्नुहोस्। हामी साना केटाकेटीहरू त्यहाँ जान्थे र तिनीहरूसँग कुरा गर्थे, र तिनीहरूसँग सधैं धेरै कुराहरू थिए। —ल्यारी रोय, मालिक एमिल रोयका छोरा, रोय्स मार्केट, विनोस्की
तपाईलाई थाहा छ यो मेरो लागि किन महत्त्वपूर्ण छ? त्यो ठाउँ हो जुन मैले हाम्रो अफ्रिकी खाना मात्र पाउन सक्छु, सांस्कृतिक रूपमा सबै कुरा, हामी दुवै आप्रवासी भएकाले जडान गर्न पनि सजिलो छ। तपाईलाई थाहा छ जब तपाई संसारको बिभिन्न भागबाट आउँदै हुनुहुन्छ, तपाई सधैं आफू हुर्केको खाना खान चाहनुहुन्छ।—मलिंगा मुकुन्द, ग्राहक, आरजीएस नेपाली मार्केट, बर्लिङटन
तपाईंले खाना प्राप्त गर्न क्रेडिट जाँच मार्फत जानु पर्दैन। एक सानो पर्ची बनाइयो, यो सबै सावधानीपूर्वक गरियो। र मेरो बुबा, मेरा काकाहरूलाई थाहा थियो कसलाई क्रेडिट चाहिन्छ। पर्ची एक कील मा राखिनेछ, धेरै परिष्कृत एक लेखा प्रणाली छैन। र अन्ततः जब व्यक्तिले तिर्न सक्छ, तिनीहरू फिर्ता आउनेछन् र यो एक विश्वास प्रणाली थियो। —लुइस मारियो इज्जो, संस्थापक लुइस र कन्सेटा इज्जोका नाति, इज्जोको बजार, बर्लिंगटन
म सधैं मानिसहरूलाई भन्छु कि यदि केहि चाहिन्छ भने म उनीहरूलाई लागि 24/7 छु । त्यहाँ समय छ जब मानिसहरू ढिलो दौडिरहेका छन्, सात सम्म बनाउन सक्दैनन्, हामी तिनीहरूको लागि यहाँ पर्खनेछौं। हामी COVID को समयमा घरहरूमा डेलिभरी गर्दैछौं। म रमजान महिनाको लागि मेरो रोटी मेरो समुदायलाई दान गर्नेछु ताकि मानिसहरूले मस्जिदमा खाना खान सकून्। –डाडो वुजानोभिक, मालिक, यूरो मार्केट, दक्षिण बर्लिंगटन